အိမ်နီးချင်းများအတွက်အရင်းအမြစ်များ• ၄၂၀၀ Louisiana • Dutchtown, St. Louis
Louisiana ၏ ၄၂၀၀ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များကိုအကျဉ်းချုံး။ တင်ပြခဲ့သည်။ ပို။ ပင်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှု dutchtownstl.org/resources။ နက်ရှိုင်းသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်းသင်ရှာနိုင်သည် နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရို, အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကုနှင့် ရဲကိုဆက်သွယ်ခြင်း DutchtownSTL.org ပေါ်မှာ။
အဆိုပါ နိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုဌာနCSB) တစ်နေ့တာအတွက်နေ့စဉ် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြforနာများအတွက်စိန့်လူးဝစ်၏ရှင်းလင်းရေးရုံးဖြစ်သည်။ အမှိုက်များ၊ ပုံများ၊ လမ်းများနှင့်လမ်းကြားများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကုဒ်ချိုးဖောက်မှုများနှင့်အခြားကိစ္စများအတွက် CSB ကိုခေါ်ဆိုပါ။
CSB သို့ (၃၁၄) ၆၂၂-၄၈၈ သို့ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းအစီရင်ခံစာတင်ပါဒါမှမဟုတ် Twitter မှတစ်ဆင့်တောင်းဆိုမှုကိုပေးပို့ပါ။ မြို့ပြ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပြissuesနာအများစုကို CSB ကကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုတိုက်ရိုက်မကူညီနိုင်သည့်အခါသင့်အားမေးမြန်းရန်မှန်ကန်သောဌာနကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိပါကနိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုဌာနကိုစတင်ပါ။
CSB အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ DutchtownSTL.org နိုင်ငံသားများဝန်ဆောင်မှုဗျူရိုမှလမ်းညွှန်.
အဆိုပါ အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကု ပိုမိုပြင်းထန်သောလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်သည့်အခါနေထိုင်သူများနှင့်မြို့ဝန်ဆောင်မှုများအကြားဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်တိုးတက်မှုအထူးကျွမ်းကျင်သူများ (NISs, NSOs သို့မဟုတ် Neighborhood Stabilization Officers ဟုလည်းသိကြ) သည်စိန့်လူးဝစ္စရဲရဲဌာန၏ပြPropertiesနာဆိုင်ရာပစ္စည်းယူနစ်နှင့်အတူဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစိတ်အနှောက်အယှက်များကိုလျော့ပါးစေခြင်း၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသောအရာရှိများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများကိုတက်ကြွစွာလိုက်စားခြင်းတို့အတွက်တာ ၀ န်ယူထားသောရပ်ကွက်များသို့သွားရောက်ရန်ဖြစ်သည်။
၂၅ ကြိမ်မြောက်ရပ်ကွက်တိုးတက်မှုအထူးကုသည်ခရစ်ယာန် Saller ဖြစ်သည်။ သူကမှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် (314) 657-1375 or sallerc@stlouis-mo.gov.
ဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ ဒိန်းမတ်အကြောင်းကိုနက်ရှိုင်းသောဆောင်းပါး အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကု၏အခန်းကဏ္။.
တစ်ဦးကိုရှာပါ ပြီးပြည့်စုံသောစာရင်း နယ်သာလန်နိုင်ငံမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့်အရာရှိများ၊ ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဒတ်ခ်ျတောင်းနှင့်တောင်ဘက်တွင်အမှုထမ်းကြသည် DutchtownSTL အရင်းအမြစ်များလမ်းညွှန်.
25 ရပ်ကွက် Alderman
Ald ။ ရှိန် Cohn 25 ရပ်ကွက်ရဲ့ Alderman ဖြစ်ပါတယ်။ သူကမှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် (314) 622-3287 or cohns@stlouis-mo.gov။ Ald ။ Cohn သည်ပန်းခြံများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာကော်မတီကိုဥက္ကairs္ဌအဖြစ်ရှိပြီး Aldermen ဘုတ်အဖွဲ့၏ပညာရေးနှင့်လူငယ်ကိစ္စရပ်များ၊ အိမ်နီးချင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးကော်မတီများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးမြို့န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပြfirstနာများသည် နိုင်ငံသားဝန်ဆောင်မှုဌာနကိုဆက်သွယ်ပါထို့နောက်သင့် အိမ်နီးချင်းတိုးတက်မှုအထူးကု။ ကျေနပ်လောက်သောဖြေရှင်းချက်ကိုအချိန်မီမရရှိပါကသင်၏ alderman ကိုဆက်သွယ်ပါ။
မြို့တော်ဝန် Lyda Krewson သည်စိန့်လူးဝစ္စ၏မြို့တော်ဝန်ဖြစ်သည်။ သူမ၏ရုံးခန်းမှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် (314) 622-3201။ မြို့တော်ဝန်ရုံးကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်တယ် krewsonl@stlouis-mo.gov။ စစ် ဦး စီးချုပ်စတီဖင် Conway ၏အီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်သည် conways@stlouis-mo.gov။ မြို့တော်ဝန် Krewson ၏စာနယ်ဇင်းအတွင်းရေးမှူး Jacob Long သို့သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည် longj@stlouis-mo.gov.
ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်။ စတိဗ် Butz Missouri အောက်လွှတ်တော်ရှိ ၈၁ ကြိမ်မြောက်ခရိုင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သူ့ရုံးခန်းမှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် (573) 751-0438 or Steve.Butz@house.mo.gov.
အရေးပေါ်အခြေအနေ 911 သို့ခေါ်ဆိုပါသို့မဟုတ် (314) 231-1212 အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်ပါ။ သင်၏အခြေအနေသည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်ကိုမသိလျှင် 911 သို့ခေါ်ဆိုပါ။
Louisiana ၏နံပါတ် ၄၂၀၀ သည်စိန့်လူးဝစ္စမြို့တော်ရဲဌာန၏ပထမဆုံးခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။ သင်သည်တောင်ပိုင်းကင်းလှည့်ဌာနခွဲရှိပထမဆုံးခရိုင်တပ်မှူးဗိုလ်ကြီး Donnell Moore ထံဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည် (314) 444-0100။ သူ့အီးမေးလိပ်စာက dmoore@slmpd.org.
မြောက်ဘက်တွင် Meramec လမ်းကို ဖြတ်၍ တတိယမြောက်ခရိုင်ရှိသည်။ ဗိုလ်ကြီးဂျိုးမော်ရစ်သည်တတိယမြောက်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သည်။ ဗဟိုကင်းလှည့်ခေါ်ဆိုခြင်းသို့မဟုတ်မှာသူ့ကိုဆက်သွယ်ပါ (314) 444-2597။ သူ့ကိုအီးမေးလ်ပို့လို့ရတယ် jamorici@slmpd.org.
စိန့်လူးဝစ္စရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲမှာဂျွန်ဟေးဒင်ဖြစ်သည်။ သူ့အီးမေးလိပ်စာက jwhayden@slmpd.org.
တရားသူကြီး Jimmie Edwards သည် St. Louis ၏ပြည်သူ့လုံခြုံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သည်။ သငျသညျမှာသူ့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် (314) 622-3391 or jedwards@stlouis-mo.gov.
ရဲများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ပါသည် မည်သူ၊ မည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ရဲကိုခေါ်ဆိုမည်နည်း လမ်းညွှန်။
ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်မြို့အနှံ့အပြားရှိအရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုကြည့်ရှုပါ dutchtownstl.org/resources။ Greater Dutchtown အနှံ့အပြားတွင်လိုအပ်ချက်များအတွက်အရေးပေါ်မဟုတ်သောနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ utility များ၊
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 17th, 2021 .
4200 Louisiana အိမ်နီးချင်းများအတွက်အရင်းအမြစ်များ